कसरी क्रन्चिरोल Day० दिन नि: शुल्क परीक्षण प्राप्त गर्ने? - मनोरञ्जन
Crunchyrol नि: शुल्क परीक्षण कसरी प्राप्त गर्ने?
के तपाईं अझै पनि कसरी क्रन्चीरोल नि: शुल्क परीक्षण दाबी गर्ने भनेर पत्ता लगाउँदै हुनुहुन्छ?ठिक छ, हामी यहाँ मद्दत गर्न आएका छौं। यस पोष्टले सबै चरणहरूमा मार्गदर्शन गर्दछ सजिलै क्रन्चयरोल नि: शुल्क परीक्षण दाबी गर्न कुनै समस्या बिना।यदि तपाईं नि: शुल्क क्रन्चायरोल परीक्षण प्राप्त गर्न तयार हुनुहुन्छ भने, त्यसपछि पपकोर्नको एक बाल्टिन र सोफेमा प्राप्त गर्नुहोस् द्वि घातुमान हेर्नुहोस् तपाईंको मनपर्ने anime।
Crunchyrol - संक्षिप्त जानकारी
Crunchyrol छयो प्रस्ताव छ कि एनिमेस को सबै भन्दा ठूलो संग्रह। नारुतोदेखि डेथ नोटमा, तपाईंले सोच्न सक्नुहुने हरेक एनिमे तिनीहरूको लाइब्रेरीमा उपस्थित हुनेछ। यो उत्तम हुन्छ यदि तपाईंले एनिमे हेर्ने विचार गर्नुभयो। यो अप्रयुक्त मनोरन्जनको पूर्ण नयाँ संसार हो। शीर्षकको कुल संख्या हाल १०००+ हो। क्रंचयरोल विज्ञापनहरूसँग पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र छ, तर तपाईं $ 7.99 / महिना तिर्न सक्नुहुनेछविज्ञापनबाट अप्ट आउट गर्न र पूर्ण HD गुणवत्तामा तपाईंको मनपर्ने एनिमेज द्वि घातुमान हेर्नुहोस्। एक क्रunch्चाइरोल प्रीमियम खाता प्राप्त गर्नु भनेको एक उत्तम निर्णय हो जुन तपाईंको काल्पनिक प्रेरणा चरित्र गोकु र नारुटो हो।
थप एनिम साइटहरू हेर्दै हुनुहुन्छ? हाम्रो जाँच गर्नुहोस् १० सर्वश्रेष्ठ KissAnime.ru विकल्पहरू लेख
Crunchyrol नि: शुल्क परीक्षण दाबी गर्न को लागी चरण निर्देशन
Crunchyrol नि: शुल्क परीक्षण दाबी गर्न एक लापरवाह कार्य हो यदि तपाईं यी चरणहरू सावधानीपूर्वक हामीहरूको साथ पालना गर्नुहुन्छ भने। हामीले प्रत्येक चरण विस्तृत रूपमा वर्णन गरेका छन ताकि तपाईं कुनै पनि कुरालाई नछुटाउनुहुन्छ। यहाँ केहि सरल चरणहरू छन् जुन तपाईं क्रन्चरोयल निःशुल्क परीक्षणको लागि दावी गर्न सक्नुहुनेछ।
क्लिक गरेर Crunchyrol को आधिकारिक वेबपृष्ठ भ्रमण गर्नुहोस् यहाँ ।
क्रन्चिरोलको होमपेजमा अवतरण गरेपछि तपाईले मूल्य निर्धारण योजना पृष्ठ भ्रमण गर्नु पर्छ। र त्यसपछि तपाइँले योजना छनौट गर्न आवश्यक छ जसको लागि तपाइँ नि: शुल्क परीक्षण सुरू गर्न चाहानुहुन्छ र त्यसपछि '14 औं दिन नि: शुल्क परीक्षण' बटन क्लिक गर्नुहोस्।
अब तपाईंले आफ्नो Crunchyrol खाता सिर्जना गर्न आवश्यक छ, एकपटक तपाईंले आफ्नो Crunchyrol खाता सिर्जना गरे पछि तपाईंलाई भुक्तान जानकारी प्रविष्ट गर्न आवश्यक छ।
एकचोटि तपाईंले चयन गरेपछि, तपाईंलाई भुक्तान पृष्ठमा लगिनेछ तपाईंको भुक्तान विवरणहरू भर्नुहोस् जस्तै तपाईंको नाम, बिलि address ठेगाना। क्रन्चीरोलसँग भुक्तानी गर्न दुई विकल्पहरू छन्, जस्तै क्रेडिट कार्ड र पेपैल। तपाईले आफ्नो प्राथमिकता अनुसार कसैलाई छनौट गर्न सक्नुहुन्छ।
एक पटक तपाईंको विवरणहरू प्रविष्ट गरिसकेपछि, तल ‘स्टार्ट फ्री ट्रायल’ ट्याबमा क्लिक गर्नुहोस् तपाईंको क्रन्चिरोल निःशुल्क परीक्षण सुरू गर्न।
तपाईं अब कुनै पनि प्रतिबन्ध बिना स्वतन्त्र रूपमा क्रन्चायरोल नि: शुल्क परीक्षण प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, र तपाईंले १--दिन भन्दा पहिले रकम कटौती हुने बारे चिन्ता लिनु पर्दैन। तर तपाईंले तोकिएको मिति भन्दा पहिले सदस्यता योजना रद्द गर्नुपर्नेछ, अन्यथा तपाईंलाई $ 7.99 चार्ज गरिनेछ।
नोट:क्रौंचिरोलको प्रत्येक योजनाले १--दिन नि: शुल्क परीक्षण प्रदान गर्दछ ताकि तपाईं आफ्नो रोजाइको आधारमा कसैको पनि सूची छान्न सक्नुहुनेछ। हामी तपाईंलाई एक मासिक योजना छनौट गर्न सिफारिस गर्दछौं जुन month 99.99 per प्रतिमहिना खर्च हुन्छ किनकि हाम्रो एकमात्र उद्देश्य एक क्रन्चीरोल नि: शुल्क परीक्षण प्राप्त गर्नु हो।
फिर्ता रकम प्राप्त गर्न क्रन्चीरोल निःशुल्क परीक्षण रद्द गर्न कदमहरू:
तपाईंको Crunchyrol सदस्यता रद्द गर्न, तपाईं यी चरणहरू अनुसरण गर्न सक्नुहुनेछ:
क्लिक गरेर तपाईंको Crunchyrol खातामा लग इन गर्नुहोस् यहाँ ।
अब, तपाइँको स्क्रिनको शीर्ष दायाँ कुनामा, तपाइँ 'प्रोफाइल' ट्याब फेला पार्नुहुनेछ; यसमा क्लिक गर्नुहोस् र नेभिगेट गर्नुहोस् 'सेटिंग'।
एकचोटि तपाईं सेटि into्मा जानु भएपछि, 'प्रीमियम सदस्यता स्थिति' ट्याबमा क्लिक गर्नुहोस्, जुन तपाईंको स्क्रिनको दायाँ भागमा हुन्छ। यसमा क्लिक गर्नुहोस् प्रीमियम सदस्यता खाता सेटिंग्समा जानका लागि।
एक पटक तपाईं प्रीमियम सदस्यता स्थितिमा हुनु भएपछि, तपाईं एक 'सदस्यता द्वारा रद्द गर्नुहोस्' बटन फेला पार्नुहुनेछ, जसले तपाईंको प्रीमियम सदस्यता crunchyrol खाता समाप्त गर्दछ।
यस तरीकाले तपाई क्रन्चाइरोलको नि: शुल्क परीक्षण प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईले १ime-दिनको लागि निःशुल्क पैसा खर्च बिना नै प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
Crunchyrol प्रीमियम खाता को लाभ:
एक क्रन्चीरोल प्रीमियम खाता प्राप्त गर्नाले तपाईंलाई थुप्रै फाइदाहरू हुन्छन् यदि तपाईंले यहाँ एन्मेन्ट गर्नुभयो भने पछुताउनु पर्दैन यदि तपाईं एनिम फ्रिक हुनुहुन्छ र तपाईंलाई सेवा पूर्ण रूपमा मनपर्दछ।
यदि तपाईंसँग छ भने क्रंचयरोल प्रीमियम खाता, तपाईं पूर्ण एचडीमा १०००+ एनिमेस शीर्षकहरू सजिलैसँग पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ र दिमागमा उडाउने एनिमेसहरूको उत्कृष्ट गुणको अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ।
तपाईंको पलंगमा राख्नु र तपाईंको मनपर्ने एनिमेजहरू हेर्दा ठूलो भावनाहरू हुन सक्छ, तर अचानक, एक विज्ञापन पप अप हुन्छ र तपाईंको एनिमेसन सत्र अवरोध गर्दछ। यो यस्तो चीज हो जुन तपाईंले क्रन्चिरोल प्रीमियमको साथ सामना गर्नुहुने छैन। एक क्रन्चीरोल प्रीमियम खाताको साथ, तपाइँ कुनै पनि विज्ञापन वा विज्ञापनहरू देख्नुहुनेछ र निर्बाध सत्रहरू अनुभव गर्नुहुनेछ।
एक क्रन्चिरोल प्रीमियम खाताको साथ, तपाईं नयाँ र अनन्य प्रसारण कार्यक्रमहरू आकाशवाणीमा भएको एक घण्टा भित्र हेर्न सक्षम हुनुहुनेछ। यो तपाइँलाई एक विशेष anime हेर्ने सत्र प्रदान गर्दछ र तपाइँ सबै कुराको बारे मा पोस्ट राख्नेछ।
क्रंचयरोल मूल्य निर्धारण र योजनाहरू:
कुनै मिडिया सेवा लिने क्रममा मूल्य निरन्तर आवश्यक कारक हो। क्रंचयरोल एक अलराउन्डर हो एनिम स्ट्रिमि service सेवा , जुन यसको मूल्य निर्धारण मार्फत परिभाषित गरिएको छ। यो तपाईंको कल हो यदि केही अधिक तिर्नु तपाईंको पैसाको लागि उनीहरूको शीर्ष-खाच भिडियो गुणस्तर र विज्ञापन-मुक्त सेवाको लागि मूल्यवान छ। उनीहरूको मूल्य निर्धारण योजना उनीहरूले प्रदान गर्ने सेवाहरूको अनुसार व्यवस्थित छन्। यहाँ केहि योजनाहरू छन् जुन Crunchyrol ले प्रस्ताव गर्दछ:
फ्यान योजना: यो योजना लागत $ 7.99 को अतिरिक्त अतिरिक्त कर को लागी। यहाँ तपाईंले केहि पनि बचत गर्नुहुने छैन किनकि यो सूचीमा सस्तो योजना हो। यहाँ केहि सुविधाहरू छन् जुन तपाईं मासिक योजनाको साथ पाउनुहुन्छ: कुनै विज्ञापनहरू छैनन्, क्रन्चिरोलमा असीमित पहुँच, जापानको एक घण्टा पछि नयाँ एपिसोड, डिजिटल म mang्गामा पहुँच, एक पटकमा एक उपकरणमा स्ट्रिम गर्नुहोस्।
मेगा फ्यान योजना:यो सबैभन्दा लोकप्रिय योजना हो, क्रन्चीरोल, जुन तपाईलाई $ $ 99 / / महिना भन्दा बढी कर लाग्छ। यो योजनाले तपाईंलाई कुनै विज्ञापनहरू, क्रन्च्यरोल पुस्तकालयमा असीमित पहुँच, जापान पछि एक घण्टा पछि नयाँ एपिसोड, डिजिटल मa्गा *, एक पटकमा चार उपकरणहरूमा स्ट्रीम, अफलाइन अवलोकन जस्ता सुविधाहरू प्रदान गर्नेछ।
मेगा फ्यान वार्षिक योजना: यो योजना एक वार्षिक योजना हो जसको लागत $।।। plus plus करहरू। यस योजनामा ​​तपाईले मासिक योजनामा% 33% बचत गर्नुभयो। त्यहाँ सम्पूर्ण सुविधाहरू छन् जुन तपाईं यस योजनाको साथ प्राप्त गर्नुहुन्छ जस्तै कुनै विज्ञापनहरू, असीमित पहुँच, नयाँ एपिसोडहरू जापानको एक घण्टा पछि, डिजिटल मंगामा * पहुँच, एक पटकमा चार उपकरणहरूमा स्ट्रिम, अफलाईन अवलोकन, मासिक योजनामा ​​१%% छुट (प्रत्येक १२-महिनामा बिल)
यी सबै योजनाहरू १--दिन नि: शुल्क परीक्षणको साथ आउँदछ जुन तपाईं कुनै योजना चयन गर्नु अघि अप्ट इन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं यस पोस्टमा माथि उल्लेख गरिएका चरणहरू अनुसरण गर्न सक्नुहुनेछ नि: शुल्क crunchyrol परीक्षण प्राप्त गर्न।
के क्रunch्कयारोल वास्तवमै लायक छ?
हो, क्रन्चियोरोल यसको लागि लायक छ किनकि तपाईले एचडीमा देख्न सक्ने धेरै शीर्षकहरू पाउनुहुन्छ, केही उत्तम एनिमेजहरू जस्तै ड्र्यागन बॉल जेड, डेथ नोट, नारुतो, र अरू थुप्रै क्रन्चरोयलमा उपस्थित छन्। त्यससँगै, तपाईं टेलिभिजनमा प्रसारण भएको १ घण्टा पछि विशेष एनिमेन्ट सामग्री हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै, तपाईं कुनै पनि एनिम स्ट्रिम गरिरहँदा कुनै पनि विज्ञापन देख्नुहुने छैन। त्यसो भए समग्रमा क्रन्चाइरोल सबैभन्दा उत्तम चीज हुन्छ कि एनिमे फ्रिकले गर्ने थियो।
हामी आशा गर्दछौं कि हाम्रो पोष्ट पढे पछि तपाईले तपाईको फ्रि क्रन्च्यरोल प्रीमियम खाता पाउनुहुनेछ। यस पोष्टले क्रन्चयरोल खाताको नि: शुल्क परीक्षण प्राप्त गर्नका लागि प्रत्येक पक्षलाई समेट्यो। यदि तपाईं सित्तै क्रन्चाइरोल ट्रायल पाउन सक्नुहुन्छ भने, तल आफ्नो विचार र विचारहरू तल दिइएको सामान्य बक्समा ड्रप गर्नुहोस्।
Hulu मा सर्वश्रेष्ठ एनिमे - हेर्नु पर्छ सूची
Hulu vs Sling TV - कुन उत्तम छ?
आईफोन १२ बनाम मिनी बनाम प्रो र प्रो अधिकतम - Mod मोडेल तुलना
PUBG जस्तो खेलहरू - शीर्ष Al विकल्पहरू
नि: शुल्क चलचित्रहरू अनलाइन मोबाइल उपकरणमा हेर्नुहोस्
कसरी minecraft को लागी optifine डाउनलोड गर्न
विद्यार्थीहरूको लागि विन्डोज १० खरीद गर्नुहोस्
नि: शुल्क फिल्महरूको लागि सबै भन्दा राम्रो वेबसाइट के हो
खेलहरू अनलाइन नि: शुल्क हेर्नुहोस्